War saxaafadeed – Ciidanka dawladda Puntland oo sii wada hawlgalladii ay ka fulinayeen Galkacyo. – Radio Daljir
Waxaa nasiib-darro ah in madaxa Maamulka Galmudug uu waraysi uu siiyay Idaacadda BBC-da uu ka been-sheegay xaalada dhabta ah oo Galkacyo ka jirta, isagoo arrinta la aaday meel aan jirin iyo arrimo qabaa?il.
Mr. Caalim marna kama uusan hadlin dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ka dhaca degmada Galkacyo, iyadoo aysan dilalka qorsheysan iyo qaraxyada ka dhicin xaafadda uu Maamulka Galmudug ka degan yahay degmada Galkacyo.
Ugu danbeyntii, Dowladda Puntland waxaa mas?uuliyad wayn ka saaran sugidda amniga dalka iyo difaaca dadka waxayna Dowladdu shacabka ugu baaqaysaa in si wanaagsan loola shaqeeyo Ciidamada Amniga oo ku howlan nabadeynta Galkacyo.
Ciidamada Amniga ee Dowladda Puntland ayaa maanta howlgalo ka fuliyay magaalada Galkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Cutubyo ka tirsan Ciidamada Amniga ee Puntland oo xog buuxda ka haya xubno ka mid ah kooxda argagaxisada ah ee Al Shabaab ayaa saakay howlgalo baaris ka fuliyay xaafadaha galbeedka magaalada Galkacyo.
Howlgalkaas ayaa kooxda Al Shabaab khasaare weyn looga gaystay iyadoo xaafadihiina laga saaray.
Dagaalkaan ayaa sababay dhimasho iyo dhawaac intaba, iyadoo ay Ciidamada Amniga ku sugan yihiin xaafadihii dagaalku ka dhacay ayna sii wadi doonaan howlgalada dhan ka ah kooxaha argagaxisada.
Wasaarada Amniga & DDR